ဆောင်ပုဒ်: "Unity, Struggle, Progress"
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "This is Our Well-Beloved Motherland"
• လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာ (ပေါ်တူဂီမှ)
၂၄ စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၇၃
၁၁ စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၇၄
၁၃,၉၄၈ စတုရန်းမိုင် ( ၃၆,၁၂၅ km² ) (အဆင့်: ၁၃၆)
၁,၆၄၇,၀၀၀  (အဆင့် - ၁၄၈)
၁၁၅.၅/km²(၄၄.၁/sq mi) (အဆင့် - ၁၅၄)
↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (PDF). United Nations. Retrieved on 2009-03-12. NB: The preliminary results of the National population census in Guinea-Bissau put the figure at 1,449,230, according to email information by the Instituto Nacional de EstudosePesquisa, Bissau.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Guinea-Bissau။ International Monetary Fund။ 2011-04-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂင်းနီဗစ်ဆောနိုင်ငံ&oldid=397179" မှ ရယူရန်
၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၃:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၃:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။